Hlola iCasablanca, Morocco - World Tourism Portal
Hlola iCasablanca Morocco
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Casablanca Morocco
Okufanele ukwenze eCasablanca
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeCasablanca
Bukela ividiyo mayelana neCasablanca
Hlola iCasablanca, inhliziyo yendawo yonke, eyezimboni nezomnotho ye Morocco nedolobha lazo elikhulu kunawo wonke, kanye nelinye lamadolobha akhombisa ukungathandeki ezweni. Nge-medina encane, engazethembisi ne-ville nouvelle, abahambi abafika ngeCasablanca bangalingeka ukuthola isitimela sokuqala ukuya eRabat eseduze. I-Mosque yase-Hassan II esesabekayo futhi eyenzeka ebusuku, yize kunjalo, ifanele okungenani usuku lokuhamba kwakho eMoroccan. Futhi uma unguhlobo oluyinqaba, oluzimele lwabahambi olufuna ukudlula lokho 'okuhle', lokhu kuphila kwedolobha elikhulu laseNyakatho Afrika kukho konke ubukhazikhazi nobukhazikhazi, ngokuhlukahluka kwamasiko alo (kukhona abokufika lapha abavela kwezinye izingxenye eziningi of Africa), kanye nezindawo zayo eziningi zokuphila kwasemini- nobusuku.
Idolobha lesimanjemanje leCasablanca lasungulwa ngabadobi baseBerber nge10th Century BC futhi ngemuva kwalokho lasetshenziswa ngabaseFenike, amaRoma, namaMerenid njengechweba lobuchwepheshe elibizwa nge-Anfa. AmaPutukezi awubhubhisa futhi wawakha kabusha ngaphansi kwegama iCasa Blanca, kodwa wawushiya ngemuva kokuzamazama komhlaba e1755. Inkosi yaseMoroccan yakha kabusha leli dolobha njenge-Daru l-Badya futhi yanikezwa igama layo lamanje leCasablanca ngabathengisi baseSpain abasungula izisekelo zokuhweba lapho. AmaFulentshi athatha lo muzi e-1907, ewusungula njenge-protector e-1912 futhi eqala ukwakha i-ville nouvelle, kodwa-ke yathola ukuzimela kanye nezwe lonke le-1956.
ICasablanca manje MoroccoIdolobha elikhulu kunawo wonke elinabantu abacishe babe yizigidi ezingama-4 futhi liqhosha ngechweba elikhulu kunazo zonke emhlabeni kodwa alikho insiza yesikebhe yanoma yiluphi uhlobo. ICasablanca nayo inenkululeko futhi inenqubekela phambili Moroccoamadolobha.
ICasablanca inesimo sezulu saseMedithera esinezimbali zasehlobo ezifudumele, ubusika obumnandi nemvula elinganiselayo.
I-Mohammed V International Airport iyisango elixakeke kakhulu kuleli futhi lixhumeke kahle eYurophu.
Kukhona imali ekhokhelwa kahle eqhamuka eTangier iye e-El Jadida, edlula eCasablanca naseRabat.
Ubudala obuncane bokushayela eCasablanca yi-18. Njalo phatha ilayisense lakho lokushayela nephasiphothi ngenkathi ushayela.
Mosque King King II, Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdallah, Tours: Sat-Thu ukuqala e-9AM, 10AM, 11AM and 2PM. I-mosque entsha, inkulu kunayo yonke eMorocco futhi ingeyesithathu ngobukhulu emhlabeni-futhi iqukethe i-minaret ende kunazo zonke emhlabeni. Ungomunye wama-mosque amabili amakhulu eMorocco avulekele abangenawo amaSulumane. Ingaphakathi elihle ligcwele izici zamanzi, ophahleni oluvulekela esibhakabhakeni, isando esikhulu esisekelweni (asisebenzi), nomsebenzi omuhle wethayile. Kukufanele uhambo oluya edolobheni.
I-Old Medina, eNyakatho ye-Place des Nations Unies Kunedolobhana elincane, elinesiko elibiyelwe ngodonga enyakatho yeCasablanca. Uma ngabe usedolobheni kufanele ukuvakashelwe, kepha akulutho uma kuqhathaniswa nobukhazikhazi be-Fes noma Marrakech.
ICorniche ingumakhelwane ogwini lolwandle, entshonalanga ne-Mosque yase-Hassan II. Eminyakeni eyishumi edlule, bekuyindawo yokuchuma enhle - amahhotela akleliswe ohlangothini lweBoulevard de la Corniche kanye nama-nightclub abelele ngakolunye uhlangothi. Iningi libukeka sengathi lizibonile izinsuku ezingcono, kepha kucishe kudumaze ukuthi lifana kangakanani neNew Jersey Shore. Kanye neBoulevard de l'Other Atlantique kunamahhotela amaningi amasha, we-fancier. ICorniche futhi iyikhaya lamaketanga amaningi okudla okusheshayo asentshonalanga. Inkundla yemidlalo yeshashalazi entsha engasentshonalanga ingatholakala nalapha, kepha inketho engcono kakhulu ukuhamba ngokuhamba ngomgwaqo, uphumula kwenye yamakhofi amaningi okubuka ulwandle.
IShrine of Sidi Abderrahman yakhelwe edwaleni elingasogwini, idlula iThe Corniche, futhi itholakala kuphela ezindaweni eziphansi. Ithempeli uqobo alikhawulwanga kwabangewona amaSulumane, kepha izivakashi zivunyelwe ukuhlola indawo encane, enjengeMedina evele yakha lapho. Ukubheja okungcono ukuhamba ngayo ogwini bese ubheka ukubonwa kwezindonga ezinhle ezimhlophe ngaphambi kokubamba i-cab ukuya ezindaweni ezikude.
Mahkama du Pacha. Lesi yisakhiwo se-Hispanic-Moorish esinezindlu ezingaphezu kwama-60 ezihlotshisiwe ezenziwe ngophahla obabazekayo. Kunezitimela eziningi nezitimela zensimbi eziyinkimbinkimbi kanye nezitezi ezifakwa amathayela amahle. Ngenkathi ukungena kungenzeka kube mahhala akulula ukungena. Udinga ukuthola umhlahlandlela wokukuhambisa. Buza nxazonke - ikakhulukazi uma ukhuluma isiFulentshi esithile - ngoba kufanelekile ukungena. Amahora wokuvula: Mon-Sat 8: 00-12: 00 & 14: 00-18: 00.
I-Central Post Office Woza lapha ukuthumela amakhadi akho okubhalwe ngesitayela! Yakhelwe ku-1918, i-facade yalesi sakhiwo yakhiwa bobunjwa obuyindilinga nobunxande. Uma ususondele uzothola umbono omuhle wezithombe ezinhle kakhulu.
I-Aïn Diab Plage, isiphetho se-Casa Tramway. Mahhala Yiya ukubukela abantu abakhulu, ujoyine umdlalo webhola lezinyawo ohamba phambili, uthenge i-paddleball esethwe kumthengisi oselula, noma uqashe ihhashi noma ikamela. Letha owakho wepikinikini noma uzame amasangweji, u-ayisikhilimu, ama-pastry omngane, i-popcorn, ujusi wewolintshi omusha, ama-fries ama-french, ikofi, netiye elithengiswa ezitimeleni noma edlula abathengisi. Isambulela nezihlalo ezimbili.
Ukubhukuda e-Ain Diab noma kwenye indawo eku-Moroccan Atlantic Coast kungaba yingozi ngenxa yokugeleza kwama-rip. Amanzi ajwayele ukubanda ngisho nasezinyangeni zasehlobo, kepha kunezinsuku ezihlukile lapho amanzi efudumele futhi engenawo ama-bur of flow.
Eduze nolwandle olusendaweni yase-Ain Diab, lapho une- "Moroc Mall", okuyindawo yezitolo enkulu kunazo zonke e-Afrika. Zonke izinhlobo ezinkulu zamaketanga, izitolo kanye (nemikhiqizo ekhethekile) zimelelwa ezitolo zezitolo, kanye naseshashalazini ye-IMAX neminye imisebenzi eminingi ehlukile ngaphandle kokuthenga.
Eduze neMegarama Cinema nangaphambi kwesi mosque sase-Abdulaziz esinomusa, kukhona une "Anfa Place Mall". icishe ifane neyangaphambili.
Eduze naseMedina yakudala kulula ukuthola izindawo ezithengisa izinto zendabuko zaseMorocan, njengamathegi, ubumba, izimpahla zesikhumba, ama-hookahs, kanye nenqwaba yama-geegaws. Ku-Fes noma iMarrakesh ukukhethwa nomncintiswano kukhulu kakhulu, futhi ungahle uzuze ngentengo ephansi.
Umakhelwane waseMaarif (eduze nesikhungo samawele) unamagama amaningi emikhiqizo yaseYurophu naseMelika, njengeZara. Izingilazi zomklami, izicathulo zesikhumba, namabhande "angempela", izikhwama, namahembe kungenziwa ngamanani entengo.
Umakhelwane weDerb Ghalef une-souq enkulu okungeyona eyokuphelelwa inhliziyo. Iqoqo lemigqumo emincane, ngayinye ifakwe izingcingo "ezingokoqobo", amawashi "angempela", nezambatho "zangempela" zegama lomkhiqizo. Izitolo zihlukaniswa ama-alleys angekho ngaphezu kwamamitha amathathu ububanzi, ezinye zazo eziphindwe kabili njengamaphayiphi wamanzi. Kunezithelo eziningi ezime kahle phakathi nendawo, ezenza indawo enhle yokuphinda uhlele futhi uhlele uhambo lwakho. Abanini be-stall, yebo, bangamakhosi okuxoxisana, futhi ngaphandle kokuphatha kahle ama-Arabhu nomgogodla oqinile, kungenzeka ukuthi ukhokhe kahle ngaphezulu kwenani elihamba ngalo nganoma yini.
Izindawo zokudlela eziseMorico azivuli kuze kube yi-7pm ekuqaleni, futhi iningi labantu alidli kuze kube kamuva kakhulu. Qiniseka ukuthi ushaya kuqala futhi uqiniseke ukuthi indawo yokudlela oyikhethayo ivuliwe.
Ukuphila ebusuku e-Casablanca kunezibuyekezo ezixubile. Abesifazane bangazizwa bengakhululekile neze nesixuku sabesilisa kakhulu emigoqweni eminingi nasezindlini zobusuku. Kepha uma ugaya kancane, uzothola izindawo ezinhle kakhulu zokuphuza, ukudansa kanye nokubukela abantu. Amanye amaklabhu agcwala izifebe ebusuku. Akuyalwa ukuthi kubuyiswe intombazane ehhotela.
Uma ufuna isiphuzo egumbini lakho lamahhotela, izitolo ezinkulu ezinjenge-Acima neMarjane zithwala utshwala newayini, kepha uma kukhethwa ubhiya kushaqeke kahle. Izindawo ezinhle zokuphuza yiziindawo zokudlela zase-Yurobhu, ezivame ukuba nokukhethwa okuhle, noma imigoqo yamahhotela, ephephe ngokungenakuvinjwa futhi ekhululeke kakhudlwana. Amakilabhu amaningi asebusuku asentshonalanga akhona ezindaweni eziseMaarif naseGironde.
ICasablanca ihanjiswa yizinkampani zonke ezingamaselula ezingatholakala kwenye indawo eMorocco. I-Inwi, i-Orange, neMaroc Telecom (IAM) yizona ezivame kakhulu. Izingcingo ezingathengwa kunoma yiziphi kulezi zitolo zesitolo, futhi eziningi azisebenzi ezinhlelweni zokushayela. Esikhundleni salokho, amakhadi wokuphinda athengiswe angathengwa ezitolo eziyizikhonkwane eziqukethe inombolo yokushayela. Lapho leyo nombolo ibizwa, inkampani yengeza inani lekhadi kubhalansi ye-akhawunti yakho. Ngenye indlela, kungathengwa iSIM khadi engaphezu kweyodwa bese ishintshwa ngaphakathi nangaphandle kocingo, uma abasebenzisi bedinga izinombolo zocingo ezingaphezu kweyodwa.
ICasablanca kungenzeka ukuthi inikeze izihambi zaseNyakatho Melika noma zaseYurophu noma yikuphi ukuphathwa ngamakhanda. Yize siyisikhungo esikhulu sabantu kanye nesihlalo sezentengiselwano, iningi ledolobha lingaphansi kweminyaka engu-50 futhi kungenzeka lithathwe kalula nje e-Los Angeles or Madrid. Ukudla kufana neYurophu njengoba ingena eMorocco, ngamaphizili kanye nama-hamburger kaningi njengama-tajines nama -zala. Kwezinye izindawo, njengendawo yaseMaarif naseGironde, ukubona owesilisa e-djellaba noma imbongolo edonsa inqola yemifino kungukudonswa kwempahla. Uma ngabe ngisho nokukhohlakala kwesiko laseMoroccan njengaleli kukuningi kakhulu kuwe, noma yiliphi ibha yehhotela noma indawo yokudlela izofana nekhaya amahora ambalwa.
Lapho ufuna ukuhlola i-Casablanca nokuthi yini ezungezile, amanye amadolobha aseMoroccan kungenzeka abe ngesitimela: esiteshini esikhulu sesitimela yiCasa Voyageur.